Fijoroana Kiorda: Fanavaozam-baovao telo herinandro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Avrily 2018 4:01 GMT
(Marihina fa tamin'ny 16 aogositra 2006 no nivoaka ny lahatsoratra teny anglisy)
Rehefa niato kely aho dia niverina indray ary nanendry tany ho any…nandalo ny roatokombolana ary maro ny zavatra azo tantaraina….
Nambara tamin'ny faran'ny volana jolay fa hanao fitetezan-tany an'i Etazonia sy i Eoropa ho fampiroboroboana i Bayan Sami Abdul Rahman hiresaka an'i Iràka hafa- Kiordistana Irakiana. Raha tokony ho varavarana lehibe misokatra izany hampiroboroboana ny kolontsaina kiorda, dia eo ho eo ihany no nandraisana azy. Tsy natoky ilay fanentanana dokambarotra ireo bilaogera tsy kiorda ary tahaka izany koa ireo mpankasitraka ny ady ao Iràka sy ireo avy amin'ny elatra ankavanana tamin'ny antsafa fohy niresahana ny hevitra lehibe tao amin'ny Tranonkalan'ny Iràka hafa. Indrisy, tsy nanararaotra tamin'ity varavarana misokatra ity ireo bilaogera kiorda. Nanao doka ny filazana i Vladimir ao amin'ny From Holland to Kurdistan (tahaka izany ihany koa ny Kurdistan Blog Count), ary namoaka sombiny milaza fa nandray anjara tamin'ny fanentanana ny The Other Iraq ilay mpiantsehatra John Stewart.
Koa satria tany Libanona ry zareo raha nitranga ny toe-javatra, dia mbola niresaka ny fiantraikan'ny ady ihany ireo bilaogera kiorda. Roj Bash! nanome ny tantaran'ny Kiordan'i Libanona. Navoakan'i From Holland to Kurdistan kosa ny fanambaràna fanamelohan'ny Antokon'i Kiordistan ao Lebanona ny fanafihana Israeliana. Kurdish Aspect nanoratra ny fiezahan'ny governemanta tiorka hahamirazotra ny PKK sy ny Hezbollah. Ary i Sami avy ao amin'ny An Iraqi's Thoughts nanoratra ny fiovan'i Afovoany Atsinanana tamin'ny fomba tsy nampoizina tamin'ny ady nifanaovan'ny Hezbollah sy i Israely.
Ankehitriny miala amin'ny tamberina isika ka mankany amin'ireo bilaogy tsirairay. Hiwa avy ao amin'ny Hiwa Hopes nanoratra ny maha-zava-dehibe ny 21 Aogositra, ny andro manamarkika ny fanentanana Anfal namelezana ny Kiorda. Mandrisika ny Kiorda rehetra izy hampiseho amin'izao tontolo izao amin'io andro io ny fileferan'ny vahoaka kiorda. Ny tantara hafa nomeny antsika dia ny raharaha iray nampalahelo nahazo ilay Kiorda iray nitady fialokalofana izay nanimba ny herijikany hahazo fandresena tamin'ny raharaham-pitsarany rehefa niangaviana izy hianiana amin'ny Koràny. Ary farany, notsikerain'i Hiwa ny politika vaovao fitsinjarana ny loharanon-karena nataon'ny Fiadidiam-Paritr'i Kiordistana ho toy ny zavatra tokony ho natao efa hatry ny ela.
From Holland to Kurdistan nanoratra ny tranonkalam-baovao Kiorda miorina ao Holandy, ny Azady.nl, nosomparan'ny mpisovoka Tiorka. Lohahevitra hafa indray ny tatitra farany natao tamin'ny Vondrona Eoropeana momba ny toe-draharaha ara-kolontsaina an'ireo Kiorda ao Torkia sy ny fomba ahatongavan'ny Kiorda sy ny Tiorkmana any Iràka ho ohatra tonga lafatry ny fandriampahalemana. Ary ny farany indrindra, manana ny lahatsoratra tsara dia tsara momba ny fampihorohoroan'ny PKK izy:
Hiresaka momba ny iray amin'ireo lohahevitra anisan'ny mampisara-tsaina indrindra ao Torkia aho: “ny fampihorohoroan'ny PKK”. Izaho manokana tsy tia mampiasa ny voambolana fampihorohoroana. Fikambanan'ny mpampihorohoro ny PKK ho an'i TTorkia fa mpiady mitady fahafahana kosa izy ireo ho an'ny maro amin'ny Kiorda. Ao anatin'izao vanim-potoana “iadiana amin'ny fampihorohoroana” izao, niseho imbetsaka tamin'ny efijerin'ny fahitalavitra ny voambolana fampihorohoroana. Imbetsaka ny hetsika “fampihorohoroana” no entina iadiana amin'ny “fampihorohoroana”. Matetika ny governemanta no mivadika ho andrimpanjakana tsirefesimandidy sy mpamoritra, rehefa hiady amin'ny fampihorohoroana. Izaho anefa tsy te-hampiasa ny voambolana hoe “mpampihorohoro”, satria efa natao hampitongilana miharihary izany. Samy efa nampiasa herisetra na ny fanjakana tiorka na ny PKK. Ary tazoniko ihany koa ny teniko tsy hilaza azy roa tonta ho mpampihorohoro!…
…Amin'ny hevitro kely dia kely tsy ny PKK no fototry ny olana. ny “Fampihorohoroana” matetika dia vokatry ny fanilikilihana ara-politika sy ara-tsosialy. Ary izay no olana! Ahilikilika tsy ho ao anatin'ny tontolo malalaka sy demaokratikan'i Torkia (2006 ny resaka eto) ny Kiorda. Ny manaraka amin'ny olana dia ny fipongaran'ny herisetra (2004) avy amin'ny roa tonta indray. Mampididoza amin'ny vahaolana demaokratika sy milamina amin'ny raharaha kiorda izany herisetra izany.
Tsara hovakiana amin'ity herinandro ity.
Amin'ny manaraka indray!